मुख्य समाचार – Nagarik Today
Dec12018 by suchanapatiNo Comments
मुख्य समाचार, राजनीति, समाज
काठमान्डौं १५ मङ्सीर । निर्मलालाई न्याय देऊ भन्दै सरकार बिरुद्ध युवाहरुले नारा जुलुस निकालेका छन । शनिबार काठमान्डौंको माइतीघर मण्डला देखी नयाँबानेश्वर सम्म जुलुर्स र्‍याली निकालिएको थियो । शुक्रबार निर्मलाको पोस्टर टाँस्ने क्रममा प्रहरीले केही युवाहरुलाई पक्राउ गरेको थियो । सोही बिरुद्ध आज जुलुस निकालेको जुलुसमा सहभागीले बताए । अब पनि सरकारले न्यायका निम्ती कदम नचाले यो भन्दा पनि कडा रुपमा प्रस्तुत हुने बक्ताहरुले भने । हेर्नुहोस् भिडियो :- ﻿
Nov292018 by suchanapatiNo Comments
अन्तर्राष्ट्रिय, मुख्य समाचार, राजनीति
काठमाडौँ, १३ मङ्सिर । म्यान्मारका स्टेट काउन्सिलर आङसाङ सुकीले नेपाल र म्यान्मारबीच व्यापार सम्बन्धलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्शले स्थानीय भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको ‘नेपाल चेम्बर एक्स्पो–१८’लाई विशिष्ट अतिथिका रुपमा सम्बोधन गर्दै उहाँले दुवै मुलुकमा मानव संसाधनको उपयोग गरी आर्थिक विकास र समृद्धिका गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने बताउनुभयो । नेत्री सुकीले नेपाली उद्यमीलाई म्यान्मारमा लगानी गर्न आग्रह गर्दै कृषि, जलविद्युत्, प्रविधिलगायत क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिने विचार व्यक्त गर्नुभयो । अर्काे प्रसङ्गमा नेत्री सुकीले नेपालसँग आफ्नो पुरानो भावनात्मक सम्बन्ध रहेको बताउँदै आफूले नेपाल र नेपालीलाई सदैव सम्मान र माया गर्ने बताउनुभयो ।
काठमाण्डौं १२ मङ्सीर । बराहक्षेत्र नगरपालिका–२ सुनसरीका भुपाल बस्नेतको सकेसम्म स्वदेशमै केही काम गरौं भन्ने सोच थियो। सोही सोचले गर्दा उनले पहिलोपटकको वैदेशिक रोजगारी त्यागे पनि । वैदेशिक रोजगारीबाट खासै प्रगति हुने नदेखेपछि साउदी अरेबियाबाट घर फर्केका बस्नेतले गाउँमै उद्यमका लागि अनेक प्रयत्न गरे। तर, उनले सोचे अनुसार देशको अवस्था कहाँ छ र ? विशेष सीप वा लगानी गर्न सक्ने पुँजी नहुँदासम्म गुजारा चलाउन हर कोही युवालाई अप्ठेरो कायमै छ। उनी पनि सोही अप्ठेरोबाट अछुतो रहन सकेनन् । यस्तै अप्ठेरोले गर्दा वैदेशिक रोजगारीको सपना त्यागेका ३७ वर्षीय बस्नेतलाई पुनः सोही बाटो अवलम्बन गर्न बाध्य बनायो। किनकि स्वदेशमा उद्यम गर्नलाई जति प्रयास गर्दा पनि उनी असफल भए। अनि २०७३ को जेठ ९ गते उनले पुनः वैदेशिक रोजगारीको बाटो तताए । एक मनले विदेश जाने र अर्को मनले नजाने अन्योलमै रहेको बेला सुरु गरेको दोस्रोपटक
‘यो सरकार जुम्रा मार्न बनेको होइन ,देश विकास गर्न बनेको हो ’- प्रम ओली
काठमाडौं, १२ मंसिर । सरकारले काम नगरेको भनेर आलोचना भइरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने त्यसको प्रतिकार गरेका छन् । उनले सरकार काम गर्न व्यस्त रहेको बताएका छन् । उनले सरकार जुम्रा मारेर बस्न नबनेको भन्दै देश विकासका लागि आफु ब्यस्त रहेको बताए । उनले भने कसैले सरकार कहाँ छ ? कसैले जुम्रा पनि मारेन, सिन्को भाँचेन भन्ने गरेका छन्, ‘यो सरकार जुम्रा मार्न बनेको होइन । देश विकास गर्न बनेको हो ।’ albuterol inhaler no prescription. मंगलवार काठमाडौंमा आयोजना गरिएको सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । उनले सरकार कहाँ छ भनेर मजदुरलाई सोध्न आग्रह गरेका छन् । केही दिनमा मेलम्ची आउने र त्यसले सरकार कहाँ छ भन्ने जवाफ दिने उनले बताए । उनले काठमाण्डौंका सडक बढारिने, धोइने काम गरिने भएकाले सरकारको काम प्रत्यक्ष देख्न सकिने
काठमाडौं, ११ मंसिर । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा मजदूरको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि विशेष व्यवस्थाको घोषणा गर्न लागेका छन्। प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादीमा विशेष समारोह आयोजना गरेर मन्त्री विष्टले कार्यक्रमको घोषणा गर्न लागेका हुन् । buy propecia 1mg online. सोही घोषणा संगै अबदेखि हरेक वर्ष मंसिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाउने कार्यक्रम समेत तय भएको छ। सरकारको यो कार्यक्रम घोषणासँगै अब सबै क्षेत्रका श्रमिकले योगदान र सहभागिताका आधारमा निवृत्तिभरण पाउने ब्यवस्था लागू हुने छ । सरकारले यस कार्यक्रममा समावेश हुनका लागि तीन महिनाको अवधि दिएर सातै प्रदेशमा रहेका रोजदातालाई सूचीकृत हुन आह्वान गरिसकेको छ। औद्योगिक, प्रतिष्ठानमा कामदार गर्ने मजदुरले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अब आधारभुत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक नि
प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने यातायातमा चार दिन जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्दै
काठमाण्डौ, ११ मङ्सीर । एशिया प्याशिफिक समिटका लागि विभिन्न देशका अतिविशिष्ट र विशिष्ट पाहुनाहरु आउने भएपछि प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने यातायातमा चार दिन जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले यही मङ्सिर १३ देखि १६ गतेसम्म जोर बिजोर प्रणाली लागू गरेको प्रहरी प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीले जानकारी दिए। viagra originale online. महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार मङ्सिर १३ र १५ गते बिजोर र मङ्सिर १४ तथा १६ गते जोर अङ्कका सवारीसाधन सञ्चालन गर्न पाइनेछ । अत्यावश्यक सेवा र शैक्षिक संस्थाका सवारी साधनमा भने जोर बिजोर प्रणाली लागू नहुने महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले आज एक सूचना जारी गरी जानकारी दिएको छ । यही मङ्सिर १४ देखि १७ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने एशिया प्याशिफिक समिटका लागि विभिन्न देशका सरकार प्रमुख तथा उपप्रमुख सहभागि हुने कार्य
आज प्रथम सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाइँदैं, सामाजिक सुरक्षा दिवस नयाँ युगको शुरुआत भएको प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश
काठमाडौँ, ११ मङ्सिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘प्रथम सामाजिक सुरक्षा दिवस’ नयाँ युगको शुरुआत भएको बताउनुभएको छ । पहिलो सामाजिक सुरक्षा दिवस तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएको अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस दिवसको दिनबाट सरकारले हुँदा खाने र हुने खाने, रोजगारीमा रहेका र रोजगारी गुमाएका वा नभएका सबैलाई समेट्ने नयाँ प्रणालीको थालनी गरेको बताउनुभएको छ । free sample viagra women. सन्देशमा उहाँले मङ्गलबारदेखि सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएको बताउँदै आफूले अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै सबैको सहभागितामा सामाजिक सुरक्षाको योजना लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ । “श्रमको सम्मान गर्ने, सबैलाई श्रममा लाग्न उत्प्रेरित गर्ने र आधुनिक सभ्य समाजअनुरुप सबैको संरक्षण गर्ने प्रणालीमा हामी मङ्गलबारबाटै प्रवेश गर्दैछौँ,” प्रधानमन्त
Nov262018 by suchanapatiNo Comments
निर्मलाको बुवालाई उपचार गर्न काठमाण्डौं ल्याएपछि कान्छि आमा लक्ष्मीको भयो यस्तो बेहाल, धरधरी रुँदै गरिन् यस्तो याचना (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाण्डौं, १० मंसिर । छोरीको बलात्कार पछि हत्या भएको चार महिना बितिसक्दा पनि हत्यारा पत्ता लाग्न नसकेपछि कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तका बुवा यज्ञराज पन्तले मानसिक सन्तुलन गुमाएका छन् । छोरीको हत्यारा सार्वजनिक गर्न माग गर्दै कञ्चनपुरमै धर्ना बसेका उनी धर्ना बसेको ८ दिन पछि मानसिक स्वास्थ्यको समस्यामा परेका हुन् । उनलाई अहिले उपचारका लागि काठमाण्डौं ल्याइएको छ । यज्ञराजसंगै निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पनि काठमाडौं आएकी छन् । कञ्चनपुरमा जारी धर्नामा निर्मलाकी कान्छि आमा छन् । भारतमा रहेका निर्मलाका बुवा र कान्छि आमा लक्ष्मी पन्त छोरीको हत्या पछि नेपाल आएका हुन् । निर्मलाको बुवा काठमाडौं ल्याइए पछि धर्नामा बसेकी कान्छि आमा विछिप्त भएकी छन् । उनले धर्नामा बसेर आफुहरु माथि परेको यो बज्रपातमा सरकार रमिते बनेर बसेको भन्दै आक्रोश ब्यक्त गरिन् । धरधरी रोएकी उनले आफुहरु माथि परेको यो अ